China 1P40 YEMAHARA MAVHIVERU ANODZORA MAVHIVHA 1SPOOL Vatengesi uye Fekitori | Nzou Fluid Simba
Isu tiri hydraulic zvinoriumba zvinogadzira, Isu tinogadzira uye tinopa chete yepamusoro mhando, hurema yemahara hydraulic zvinoriumba zvaunogona kuvimba nazvo. Chikonzero nei vatengi vachiwedzera vachisarudza US inyaya yekuti ine zvayakanakira pamusoro pemamwe mabara maererano nekuendesa, sevhisi, mhando uye mamwe margin.
Nemaoko kana michina inodzorwa hydraulic inongedzo yekudzora vharuvhu Р40 yakagadzirirwa kugovera uye kudzora kwekuyerera kwebasa pakati pejenareta (pombi) nemaitiro makuru (humburumbira, hydro-mota, nezvimwewo). Iyo inogadzirwa ne1 kusvika ku7 plungers, ine yakafanana kana serial chiito, ine yakajairika kana yega yekumashure vharuvhu kune yega plunger, iine kana isina chengetedzo vharuvhu.
Р40 muparidzi wemono-bloc. Muviri wayo wakagadzirwa nesimbi yakakandwa EN-GJL300. Midziyo inogadzirwa nesimbi yakaomeswa ine yakaoma chrome yakanamirwa pamadziro.
Iko kushandiswa kweP40 P80 mavharuvhu kwave kujairika munzvimbo zhinji dzekushandisa nemaindasitiri, senge; makran, mitsara yegungano, zvishandiso zvemasango, marori emigodhi uye zvekuchera. Muchokwadi, pane zvakakwirira zvinodiwa pakushandiswa kweiyi P40 P80 vharuvhu, zvekuti inenge ichitsiva dzinenge dzese tsika yechinyakare yemagetsi hydraulic yekudzvanya ekushongedza mavharuvhu mune yemazuva ano hydraulic kutonga masystem.
Mugovera akagadziriswa nemabhaudhi maviri
Iyo hydraulic distributor P40 inoshandiswa kudzima / kudzima uye kutungamira iko kushanda kwemvura pakati pemusoro wekuyerera magernerator (mapombi emagetsi), vatengi vanoyerera musoro (hydraulic cylinders, mota, nezvimwe) uye tangi. Iyo inogadzirwa inosvika kumatanhatu spools.
Chezita Kuyerera: 40L / min Max 40L / Min, Max Kushanda Pressure 315Bar
Maitiro Ekushandisa: Pneumatic Kudzora, Magetsi uye Pneumatic kutonga, Magetsi uye hydraulic Kudzora, Remote Kudzora
Kumisikidza Kudzoka maModhi:Kuvhara bhora; Kudzoka Kwechirimo
Spool Mabasa: O A Y nezvimwewo
Nzira yeOiri: Yakafanana Dunhu, Simba Kupfuura Sarudzo
Chikumbiro: Kurima tarakita, Hushini Machina, nezvimwe
10 kusvika kuNAS 1638
Max kushanda kumanikidza
Kuvuza (A, BT)
15cm3 / min pa120bar
Kugadziriswa / Spools
na1 kusvika ku7
Yepfuura: F-201346 yakakura inobereka Rexroth A4VG125 pisitoni pombi
Zvadaro: Cat OEM pombi pisitoni pombi kupembedza zvikamu 9T akateedzana